Umthandazo woXolo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kule nqaku uza kufumana okumangalisayo kunye nethemba "Umthandazo woxolo" enikezelwe ku-Saint Francis wase-Assisi.
1 Umthandazo woxolo (ophefumlelwe ngu-Saint Francis wase-Assisi):
2 Umthandazo woxolo (Saint Francis wase-Assisi)
2.1 Yenza ntoni iprojekthi?
Thandazela uxolo (iphefumlelwe ngu-Saint Francis wase-Assisi):
Nkosi ndenzele isixhobo esikhuthaza uxolo lwakho, naphina apho ifunyanwa khona inzondo, ndifuna ukunika uthando; kwezo ndawo apho kulawula khona ulwaphulo-mthetho, uxolelo loloyiso; phakathi kwengxabano yehlabathi, ndinqwenela ukuseka umanyano; Ndincede ndibeke inyani kwiimpazamo zam, ndinike amandla okuphuphuma kwamathandabuzo ngokholo.
Ndivumele, Thixo wam, ndisasaze ithemba phakathi kokuphelelwa lithemba; ndinike amandla okuzalisa ubumnyama obubandayo ngokukhanya; Ndixhamle uvuyo lwakho ngamaxesha osizi kunye nokungazinzi.
Thixo wam, mdali woxolo nokulunga, wena usenzileyo kuthando olugqibeleleyo, ndinike amandla okuqhubeka kwaye undivumele ukuba ndithuthuzele abo bayifunayo, kunokuba ndizicelele intuthuzelo; Ndinike isipho sokuqonda bazalwana bam, ngaphezu kokulinda ukuqondwa nangaphezulu kwako konke; Ndifuna ukuthanda ngaphandle kwemeko yokuthandwa.
Ndiyazi ukuba kungokunikela apho ndiya kufumana uxolo lwam, kungokuzilibala kwam ukuba ndiya kuzifumana; Kukuxolela abazalwana bam apho ndiya kuxolelwa kwaye kunjalo; Kungokuthetha uhambe kweli hlabathi lasemhlabeni apho sivuselwa kubomi obungunaphakade, amen.
Umthandazo woxolo (Saint Francis wase-Assisi)
USanta Francis uvela e-Itali, evela kwisixeko sase-Assisi, uthathwa njengendoda ebikhona ukunceda ibandla kwiimeko ezinzima kakhulu, efulathela ilifa lakhe kwaye enikezela ubomi bakhe kwinkonzo kaThixo, ehlala eneempahla njenge yokomoya ngaphezu kwezinto zokusebenza, le nto ingcwele ifakwa kwi "Umthandazo woxolo."
USanta Francis wase-Assisi, uyadunyiswa kuyo yonke into el mundo, Njengomnye wabantu abazidlayo ngamakholwa. Kwibhayiloji yale ngcwele, amaphupha azaliseka uninzi lwabantu abathembekileyo lulangazelela ubomi babo bonke:
Ubudlelwane obunothando nobumnene noThixo uYise wokulunga okungapheliyo kunye nomthandi wendalo yakhe, umnqweno woxolelwaniso phakathi kweentshukumisa zentliziyo kunye nemiyalelo yokuqiqa, imeko eyiyo yokwamkela abohlukileyo; kwabo bangabamelwane, kwabo babonwa njengabazalwana babo, ubomi benkonzo yokukholwa nokulunga, inkululeko engenatyala phambi kwemimiselo emiselweyo nokwamkelwa okumnandi ukufa njengeqabane lobomi ngokwalo.
Amaxesha amaninzi, izinto ezinkulu zinesiqalo esithobekileyo. Kananjalo, imilambo emikhulu nenamandla izalwa ivela kwimithombo emincinci yamanzi acocekileyo kwaye kancinci kancinci iyajoyina eminye imisele edlula kuyo eminye imithombo emincinci yamanzi, de ibe yenze imilambo emikhulu engena infinito ulwandle.
Singaluthatha olu thelekiso, ukuthi yintoni, into efanayo eyenzekayo ne "Umthandazo woxolo", kuba yaqala ngokungaziwa, kwi-limbo, ngaphandle kwabantu abaninzi bayinika ukubaluleka kwayo. Nangona kunjalo, ixesha elithile kamva, lo mthandazo mhle ungene ezintliziyweni nasezingqondweni ngenxa yomxholo okhuthazayo.
La Umthandazo woxolo, okwangoku iyaziwa kwihlabathi liphela, sele isasazekile nakwezona ndawo zikude zehlabathi. Esi sigwebo siyinyani kwaye siyacenga, silula, kwaye ke sinokuqondwa ngabo bonke. Uninzi luyavuma ukuba lo mthandazo ubonakalisa iminqweno ehlala ihleli eluntwini, lo mnqweno luxolo oluyimfuneko kunye nokunyamezelana.
Ubukho balo mthandazo bubonisa ukuba oyena mbhali, nguMoya oyiNgcwele wasebenza ngendlela ezukileyo kwiintliziyo ezilungele ukwamkela ubungcwele nethemba. Ngale ndlela, kufanele ukuba yasebenza kumbhali ongaziwayo walo mthandazo, owathi kamva wabekwa kwiNgcwele uFrancis waseAssisi.
Ngo-1916, embindini weMfazwe yeHlabathi yokuQala, kulapho lo mthandazo woxolo waba khona jikelele; okoko, kwihlabathi lonke uxolo lwalulangazelelwa kwaye luthandazelwa. Nje ukuba ipapashwe ngu-L'oservatore Romano; yafakwa kwizigidi zamakhaya ehlabathini. Unokuthanda: Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus wothando.
La "Umthandazo woxolo" ngokwentlalo bema kwiqhina leecawa ezithandazela uxolo: uxolo lwangaphakathi, uxolo lwengqondo, uxolo lwendalo, uxolo kwezentlalo kunye noxolo lwehlabathi. Kuba, kwesi sivakalisi yonke into ilula kwaye iyinyani, nawuphina umntu, nokuba ungubani na, unokuthi; "Amen" kwaye "makube njalo" emva kokuyifunda.
Ngoku umbuzo omkhulu ngulo; Kutheni le nto lo mthandazo wabhalwa ngu-Saint Francis wase-Assisi? Yenzeka xa umFranciscan eprinta umthandazo woxolo ekhadini nasemva ephepheni, wabamba umfanekiso ka-Saint Francis wase-Assisi. Oku kungqubana kuvumele umanyano olusondeleyo phakathi kwengcwele kunye "Umthandazo woxolo".
Ukusukela ngelo xesha, yaphela ukuba yaziwe kuphela njenge "Umthandazo woxolo" kwaye yamkelwa njenge: "Umthandazo woxolo luka-Saint Francis wase-Assisi."
"Nkosi, ndenze isixhobo soxolo lwakho" uqala ngaloo ndlela lo mthandazo, kodwa ungazi njani ukuba loluphi uxolo lomntu kwaye loluphi lukaThixo? Uxolo lomntu noxolo lukaThixo kufuneka lusebenze ngokufanayo kwaye lube nomkhamo ofanayo, kufuneka zibonisane, ukuba akunjalo, akukho bunzima bukhulu ukuphinda lo mthandazo.
Yenza ntoni iprojekthi?
La "Umthandazo woxolo", icacisa indlela uxolo lukaThixo noxolo loluntu olufanayo, kuba abantwana bakaThixo, babanga uxolo phakathi kwabo, kwaye ngokwabo bayindalo kaThixo. Kungumsebenzi wokugcina nokuhlonipha indalo kaThixo, kwaye kuye uThixo akuqondakali ukuba angonakalisa into ayakhe ngokwakhe ngothando kunye nokuthantamisa. Xa usebenzela uxolo, uyayihlonipha kwaye uyayithanda indalo kaThixo.
Ungalufumana njani uxolo lwangaphakathi? Ngasemva, umthandazo woxolo luka-Saint Francis wase-Assisi uzama ukuhambisa umyalezo awuphakamisayo; kubalulekile ukuyivulela amandla yokuqala yobomi; Thixo, apho luvela khona uxolo lokwenene. Ukuba awukondli kulo mthombo ngokuthandaza nokucamngca, "uxolo" olufunyenwe ngezinye iindlela luya kuba yinto encinci, kodwa hayi uxolo olufunwa yintliziyo.